ခံစားမှုဆိုင်ကယ်တစ်စီးဘယ်လောက်ကျလဲ။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > ရောင်းရန် ၀ ယ်ထားသော 29er - ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း
ရောင်းရန် ၀ ယ်ထားသော 29er - ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း
စျေးနှုန်းများအဆိုပါပေါက်များအတွက် $ 2,199 ကနေစတင် | အလူမီနီယံဘောင်နှင့် Shimano GRX အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သောမော်ဒယ် ၃၀ ။ ပိုမိုမြင့်မား specced မော်ဒယ်, ထို Breed | ၂၀ကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ ၂,၈၉၉ နှင့်ကာဗွန်ချိတ်တွဲခြင်းနှင့် SRAM Force 1 အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။
Team Trainee AK နှင့်ပြုလုပ်သော Swift စီးမှုပြီးဆုံးရန်အုပ်စုတစ်ခုတည်းကိုသာဖိုင်များကိုလေ့ကျင့်ခြင်းထက်ပိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကဖြစ်ပျက်ပုံကိုပြောသောကြောင့်လူအများအပြားတို့သည်စက်ဘီးအသစ်တစ်စီးပေါ်မှစက်ဘီးအသစ်တစ်စီးဝယ်ယူရန်ပြောဆိုကြသည်။ စက်ဘီးတစ်စီးကို Atri ဆိုင်ကယ်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်ပြီးဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ထက်နည်းတဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စက်ဘီးတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ပေါင်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ဘာကိုပြန်လည်ရောင်းချရမလဲဆိုတာကိုတကယ်စဉ်းစားဖို့လိုသူများစွာရှိပါတယ်။ အဲဒါအာမခံလား ငါသည်ဤပထမစမ်းသပ်စက်ဘီးကိုတစ်ချိန်ချိန်ပြန်ရောင်းချင်တယ်။ ဒီတော့ငါတို့မှာယနေ့သုံးစက်ဘီးငါးခုရှိတယ်, ဒါပေမယ့်သင် 20, 20 သို့မဟုတ် 2021 မှာသင့်ရဲ့ပထမဆုံးစမ်းသပ်စက်ဘီးကိုဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်ဒါကသင့်အတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာရေခဲမုန့်တွေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါကြောင့်သင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူကမင်းရဲ့ပထမဆုံး triathlon ဆိုင်ကယ်ကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့၊ သင်ဟာသင်ပထမ ဦး ဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒုတိယရာသီရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့၊ ဒီနေ့ဟာသေးငယ်တဲ့စနစ်တစ်ခုပါ၊ ငါတို့စာအုပ် Triathlon Bike Basics မှာငါတို့ဖော်ပြထားတဲ့စနစ်တစ်ခုပါ။ သင်ဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိအမေဇုန်အားလုံးမှရရှိနိုင်မည်။ သင်ရရှိသင့်တဲ့ triathlon စက်ဘီးများ၏အခြေခံအမျိုးအစားများနှင့်ငါလုပ်ခဲ့တာကကျွန်ုပ်ဒီစနစ်ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုခဲ့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သောအဆင့်မြင့် Triathlon စက်ဘီးများအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ရန်လူများအတွက်ထိပ်တန်း Triathlon စက်ဘီး ၅ စီးကိုရွေးချယ်ရန် n ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ သင်ဟာ entry-level စျေးနှုန်းကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါကြောင့်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ နဲ့အောက်ဈေးနှုန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုအသုံးပြုပြီးဆိုင်ကယ်ကိုပိုကြိုက်တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဝင်ပေါက်အဆင့်စက်ဘီးတွေဟာသူတို့ဆီတစ်ဒါဇင်ဆင့်လောက်ပဲရှိတာမို့သင်ဟာဒီကြီးမားတဲ့စျေးကွက်ဖြစ်တာကြောင့်တန်ချိန်တန်ချိန်များစွာရှိတဲ့အမြန်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ကယ်စက်ဘီးတွေနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချမှုတန်ဖိုးကိုလျှော့ချပေးတဲ့အတွက်ဒါကိုအသုံးချစက်ဘီးများ ၀ ယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ ရရှိရန်အချိုးရယူခြင်းအချိုးသည်ဝယ်ယူအသုံးပြုသောအခါ Shimano Altera Shimano dura-ace SRAMhorse (သို့) SRAM အုပ်စုများကို ၀ ယ်သည့်အခါရှာရန်ဒုတိယအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောကြောင့်တန်ဖိုးများကိုထိန်းထားနိုင်မည့်အုပ်စုများအစုံဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ Campagnolo ကလူအများစုကဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့အရည်အသွေးအစုံလို့ပြောကြလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ entry-level စျေးနှုန်းအပိုင်းမှာပါတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက်၊ သင်ဟာအစိတ်အပိုင်းတွေတကယ်ဖြစ်နေတာကြောင့် Campagnolo လောက်မထူးခြားတဲ့ groupet တစ်ခုကိုလိုချင်လိမ့်မယ် ရှာဖွေရန်နှင့်အားလုံးဟိုအတွက်ခဲယဉ်း ဤ Campagnolo အုပ်စု၏တန်ဖိုးကိုသင်မြင့်မားသောလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်သမားနောက်ဆုံးမှရရှိနိုင်သည့်တန်ဖိုးကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ။ ဆိုင်ကယ်သုံးစီးသည်သင်၏စာရင်းတွင်ပါဝင်သင့်သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဟာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအပြေးပြိုင်ပွဲရောက်နေတယ်ဆိုတာသင်သိရင် atri-bikes ကိုသာဝယ်ရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းတို့ကို Triathlon အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုလေ့ကျင့်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ၎င်းတွင်မြှားဘားတစ်ချောင်းရှိသည်။ သင်က Triathlon အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ အုပ်စုလိုက်စီးနင်းခြင်းအတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါကအများကြီးပိုပြီးစွယ်စုံသုံးနိုင်တာပါပဲ။ tribike ကအရမ်းကိုထူးခြားပါတယ်။ အားကစားမှာခဏတဖြုတ်ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမင်းမသိဘူးဆိုရင်တော့အဲဒါကိုသင်တကယ်မတွေ့မြင်နိုင်ဘူး၊ အားကစားကိုစိတ် ၀ င်စားသည်။ သင်ကသုံးစီးမဟုတ်သူဖြစ်သည်ဟုယူဆကြပါစို့။ အခြားသူတစ် ဦး ဦး စီးစီးနင်းသောဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုသင်အသုံးပြုလိုသည်။ သင်၏အသစ်စက်စက်နှင့်အသစ်တစ်ခုကိုသင်လိုချင်သည်။ သင်ပို။ လူကြိုက်များသောဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ဦး စွာကပ်လိုကြောင်းသေချာစေရန်လမ်းညွှန်ချက်အချို့ကိုဖတ်ပါ။ သို့မှသာပစ္စည်းများကို ၀ င်ရောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတရှိသည့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ကိုရှာပါ။ ဤစာအုပ်တွင် ၂၀၁၈ Ironman ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးစက်ဘီး (၁၀) ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုပြီးပြီ။ ဤစက်ဘီးတံဆိပ်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအစဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ယင်းတို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာစက်ဘီး ၅ စီးပါ ၀ င်သော ၀ ယ်ယူမှုနှစ်ခုကိုလွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်သောဒုတိယစက်တင်ဘာလတွင်လွယ်ကူစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောဒေသခံဆိုင်ကယ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ခရီးသွားသူတစ် ဦး ၏အကူအညီကိုသင်လိုအပ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည်။ အများကြီးရှာစရာမလိုဘဲ ၀ ယ်ပါ။ သင့်တစ် ဦး သည်တစ်စုံတစ်ရာဝယ်နိုင်သည်၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ရမည်။ ၎င်းသည်ရောင်းရန်မလိုပါ၊ ထို့နောက်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံး Trybike ကိုကြည့်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည် သင်ဆိုင်ကယ်ကိုဆိုင်ကယ်များရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကသာဆိုင်ကယ်မရှိတာကြောင့်သင်ကပြန်လည်ရောင်းချချင်တယ်၊ အကြီးအကျယ်အရှုံးမခံချင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လာပါ။ သုံးဘီးဆိုင်ကို ၀ ယ်နိုင်တယ်။ ၂ နှစ်မှ ၄ နှစ်အတွင်းစက်ဘီးစီးခြင်းသည်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည် ppened, ဒါကြောင့်ငါသင်ဝယ်သောအရာအားလုံးကိုသေချာစေချင်တယ်၊ ဒီမှာငါအကြံပြုထားတာတွေကတန်ဖိုးအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စာရင်းထဲမှာပထမဆုံးစာရင်းသွင်းရအောင်လူအများစုအတွက် cervelo p2 ဟာငါတကယ်သုံးခဲ့တဲ့သုံးစက်ဘီးပါ။ HalfIronman World Championship အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီတဲ့ဒီ Tri-Bike တစ်ခုပါ။
ဒီစက်ဘီးကဒေါ်လာ ၂၈-၂၉၀၀ ကုန်ကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့ Shimano 105 groupset၊ အခု Shimano 105 အုပ်စုစုက Shimano ၁၀၅ ခုအုပ်စုရှိတယ်၊ လမ်းမှာစက်ဘီးနဲ့သုံးစက်ဘီးတွေရတယ်၊ Shimano ၁၀၅ ကပိုကောင်းတယ်၊ Shimano El Tigre က ပိုမိုကောင်းမွန်သောပိုမိုကောင်းမွန်သည့် Shimano dura-ace ဤ ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်အုပ်စုများသည်၎င်းတို့တန်ဖိုးအချို့ကိုဆုံးရှုံးလေ့ရှိသည်။ ဒီဟာကလျောက်ပတ်သောဒေါ်လာ ၂၈-၂၉၀၀ ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤစာရင်းရှိအခြားရွေးချယ်စရာများထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာသွားနိူင်သည်။ သို့သော်ပြိုင်ကားစက်ဘီးတစ်စီးထပ်ထည့်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အရည်အချင်းပြည့်မီသောစက်ဘီးကိုသင်ရနိုင်သည်။ UM II လေဝင်လေထွက်ကောင်းလာမည့်နောက်အလွန်ကြီးသောစျေးနှုန်းဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောလေခွင်းချုပ်ကိုင်ထားသည့်ကြီးမားသောစက်ဘီးကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ '' တကယ်လို့ mG ဆိုတာငါ့ရဲ့နောက်ကျောကိုပြန်လာခဲ့တာပဲ။ ဒါကအောက်ပြွန်လည်းမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာရှေ့ကနေအများကြီးမပြေးနိုင်ဘူး၊ စက်ဘီးအဆုံးပြီးတဲ့နောက်သင့်ရဲ့ပခုံးတွေအများကြီးပိုသက်သာလိမ့်မယ်။ 2600 99 သို့သော်ဤနေရာတွင်ရှိလွန်း Shimano 105 အုပ်စုများသည် Cervelo ထက်အနည်းငယ်ပိုသက်သာပြီးရှေ့သို့စီးနင်းကာပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ကားတစ်စီးဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်အမှန်တကယ်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုရလိုပါက၎င်းသည်တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ သင်၏တံခါးနှင့်သင်စီး။ သွားနိုင်သည်မှာအမှန်တကယ်မှာဒေါ်လာ ၃၀,၄၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသော DeepEnvy ဘီးများဖြစ်သောလေခွင်းဘီးများရှိသည့် Shimano 105 ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောတွက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် ထပ်မံ၍ Shimano ၁၀၅ အစိတ်အပိုင်းသည်စာရင်းတွင်တတိယနေရာတွင်ရပ်တည်ပြီးစျေးနှုန်းစစ်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ခံစားမှုအရိပ်သည် B သည် triathlon ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည်။ နှစ်ရာကိုးဆယ်ကိုးရှိသည်။ ဒေါ်လာနှင့်၎င်းသည် tegra အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုနှစ်ခုထက် triathlon ဆိုင်ကယ်သည်သင့်အတွက်တန်ဖိုးပိုကောင်းအောင်အနည်းငယ်ပိုကောင်းသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုပေးသည်၊ သို့သော်သင်ကသင်၏တန်ဖိုးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေလိမ့်မည်။ ဒီစက်ဘီးရဲ့ဒီဇိုင်းက triathlon ဆိုင်ကယ်ရဲ့ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့်ဒီပြသနာကဒီဟာကိုရောင်းလိုက်တာလေ။ ပြွန်လေခွင်းတွေဟာသိပ်နက်ရှိုင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်လူတွေကကြည့်ပြီးကြည့်ကောင်းတယ် သင်သည်သင်၏ငွေအတွက်အမှန်တကယ်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုသာသင်ပြိုင်ကားစက်ဘီးအချို့ထပ်ထည့်ချင်သော်လည်း၎င်းသည်ဘဏ်ကိုမချိုးဖဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ ဤသည်ရှေးဟောင်းစက်ဘီးအနည်းငယ်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုရောင်းဖို့နည်းနည်းလေးပိုခက်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိလား။ ဒါကပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုလား၊ မကောင်းလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ တကယ်တော့သူက Shimano 105 နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ entry-level model ပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဒေါ်လာတစ်သောင်းလောက်ကိုပိုကောင်းတဲ့ပေါက်ကွဲသံကြီးလို့ကျွန်တော်မသေချာရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ဒီ Shimano ၁၀၅ အုပ်စုဟာဒီဝင်ပေါက်အဆင့်သာရှိပြီးစျေးကြီးတဲ့ဒေါ်လာ ၃၀ ၂၉၉ လောက်ပါမယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တွေတပ်ထားရမယ်။ အရမ်းဈေးပေါတယ်လို့ထင်တယ်၊ အခုနောက်ဆုံးစက်ဘီးနှစ်စီးဟာကျနော့်အမြင်မှာကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်လာပြီ၊ ဒီ wow တွေဟာ triathlon အဆင့်မှာ triathlon bikes အတွက်စျေးကွက်ကို ဦး ဆောင်နေပြီးပထမဆုံးကတော့ Canyon Speed ​​Maxi F 7.0 ဖြစ်တယ်။ ဒီစက်ဘီးကိုကန်ဒေါ်လာ ၂,၉၉၉ သတ်မှတ်ထားပြီး၊ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ အောက်မှာသင့်မှာနက်ရှိုင်းတဲ့ Reynolds ဘီးတွေရှိပြီးသား Shimano 105 groupset ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် upgrade model ကိုအနည်းငယ် ၀ ယ်ဖို့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ $ 30 499 ShimanoAltera အပြည့်အဝ Shimano အားလုံး tegra ထိပ်တန်းအတူတူပင်နက်ရှိုင်းသော Reynolds ကဘီးနှင့်အတူနောက်ကျောကတကယ်တော့လေခွင်းစက်ဘီးကိုအခြေခံအားဖြင့်သင်ကဒီစက်ဘီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုနိုင်သည်အခြေခံအားဖြင့်သင်ကဒီစက်ဘီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးနိုင်သည်ပြန်ရောင်း, ပြန်ကြည့်ပါ အလွန်အဆင့်မြင့် Triathlon ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည့်အတွက်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းတန်ဖိုးသည်အလွန်မြင့်မားမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးစာရင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါက liketip-to-tail ကိုလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းက Argon 18 e11 7triathlon ဆိုင်ကယ်ရဲ့စျေးနှုန်းတွေရလာတာနဲ့အမျှအဲဒါဟာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကြိုက်တဲ့အဓိကအချက်ကတော့ခေတ်မမီတော့တာလား l သည် frame သည်အလွန်မြင့်မားပြီးစျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ဖြစ်သည်။ အာဂွန်ကြောင့်သင်ရရှိသောအရာသည်သင်၏ပေါင်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ ကနေဒါဒေါ်လာယူအက်စ်ကနေဒါဒေါ်လာ။ ။ ငါတို့ရဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်ငွေကဒီမှာပါ။ ဒီစက်ဘီးကစျေးသက်သက်သာသာနဲ့၊ ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ ရှိတဲ့စက်ဘီးကိုသင်ရတယ်၊ အရည်အသွေးကောင်းပြီးချွန်ထက်တယ်။ သင်သည်နက်ရှိုင်းသောပြိုင်ကားစက်ဘီးများထပ်ထည့်ရန်သင့်တွင်ငွေရေးကြေးရေးအခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်ဤစက်ဘီးတံဆိပ် ၅ ခုသည်ယခုအခါဒေါ်လာသုံးထောင်ဆိုင်ကယ်ရှာဖွေပြီးနောက်တွင်ယခုရောက်ရှိနေသောအတွေ့အကြုံရင့်ဆိုင်ကယ်သမားအတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးဖြစ်သည်။ ' ဒေါ်လာသုံးထောင်ဆိုင်ကယ်ရှိပြီ၊ ခင်ဗျားကြည့်လိုက်တာကသိချင်စိတ်ပြင်းပြမှုမရှိဘူး၊ triathlonbike ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားကြည့်လို့ရပြီ၊ ဒါကငါပြောချင်တာက Swim Bike နဲ့ Run Foundations ကြားရှိထိပ်တန်းအဆင့်စာအုပ်နဲ့တူတယ် ငါးဆယ့်ငါးယောက်ရှိသည့်ကြယ်မှတ်သည်လအနည်းငယ်လောက်စျေးကွက်ထဲသို့ရောက်သည်။ သင်သည်စက်ဘီးမဝယ်လိုလျှင်၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုမ ၀ ယ်လိုလျှင်၊ မနှိပ်လိုပါက စာရင်းသွင်းခြင်းခလုတ်သို့မဟုတ်သင်အနေဖြင့်သင်တန်းသားများအတွက်အရေးယူရန်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအလုံအလောက်ရှိသောယနေ့လူအများအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်မည်
(soft music) - ငါနဲ့တူတဲ့သေးငယ်တဲ့ကြည့်ရှုသူတွေဆီကမေးခွန်းတွေအများကြီးရပြီးစက်ဘီးကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာအကြံဥာဏ်တောင်းတယ်။ တကယ်တော့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အဲဒါတွေကိုမှတ်ချက်တွေနဲ့အီးမေးလ်ကတဆင့်ငါမဖြေနိုင်ဘူး။ ဒီဆောင်းပါးကခင်ဗျားကိုနောက်ထပ်နည်းနည်းကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါမျှော်လင့်ချက်ကိုရှင်သန်နေစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကြီးထွားတိုးတက်မှုတစ်ခုရလာပြီးအစ်မထက်ပိုမိုမြင့်မားလာလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဤနှုန်းဖြင့်အစဉ်အမြဲစောင့်ဆိုင်းမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဒါနဲ့ ၁၅၇ စင်တီမီတာရှည်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့ရတယ်။ ငါတို့အမေရိကန်ကြည့်ရှုသူများအတွက်ကတော့ ၅ ပေ ၁.၈ လက်မရှိသည်။
နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်ဟာအရမ်းကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စက်ဘီးစီးတာကိုနှစ်သက်ပြီးခံစားခဲ့ရတဲ့စက်ဘီးစီးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းကိုစီးနင်းခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့စိတ်မသက်မသာခံစားခဲ့ရပြီးလုံခြုံမှုကင်းမဲ့စွာခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စကနေကျွန်တော်အများကြီးသင်ယူခဲ့ရပြီးဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမင်းနဲ့မျှဝေချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ပြသရန်ကျွန်ုပ်၏ Canyon Ultimate ကိုအသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်ဤစက်ဘီး၏အသေးငယ်ဆုံးအရွယ်အစားမှာ XXXS ဖြစ်သောကြောင့်ဘီးငယ်များရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ပိုမို။ (soft music) အခုတော့တိုတောင်းတဲ့စက်ဘီးစီးသူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအကွာအဝေးပါ။
ကုန်းနှီးအမြင့်ဟာပြissueနာသိပ်မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့သင်ကလက်ကိုင်သတ္တဝါများကိုအနိုင်ယူနိုင်ရုံသာမကလက်လှမ်းမီမှုသည်ကြီးမားသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ဆန့်ထုတ်ခြင်းနှင့်တင်ပါးပေါ်သို့တင်ခြင်းဖြင့်သင်၏တင်ပါးကိုတုန်ခါသောအခါ၊ နောက်ကျော, ပခုံးနာကျင်မှု, လည်ပင်းနာကျင်မှုနှင့်ကုန်းနှီးအပေါ်အဖျားခတ်ဖြစ်နိုင်သည်ကုန်းနှီးပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်ကတိုတောင်းတဲ့ထိပ်ပြွန်နှင့်အတူစက်ဘီးကိုရှာဖွေချင်တယ်။
အမှန်တကယ်အရွယ်အစားနှင့်ထုတ်လုပ်သူအားလုံးထံမှအသေးဆုံးဘောင်၏လက်လှမ်းမမီအကြားကွာခြားချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်တကယ်တိုတောင်းတဲ့ထိပ်ပြွန်ရှိတဲ့ဘောင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ထိပ်ပြွန်အရှည်ကိုတိုစေခြင်းကရှေ့နှင့်နောက်ဘီးများကိုပိုမိုနီးကပ်စေပြီး၎င်းသည်တိုတိုစက်ဘီးစီးသူများအတွက်တကယ့်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
ယခုငါဤစက်ဘီးပေါ်တွင်အနည်းငယ်သာခြေချောင်းထပ်နေသည်သာဖြစ်သော်လည်းအတိတ်ကာလက ၇ နာရီမှစက်ဘီးကိုငါစီးနင်းခဲ့ပြီးနာရီဝက်မှငါးနာရီအထိလမ်းဖြတ်ကူးခဲ့ရသည်၊ ထို့အပြင်ခြေချောင်းများဖြတ်ကူးခြင်းသည်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်ပြproblemနာအနည်းငယ်သာရှိသည်မှာထင်ရှားသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုမရပ်တန့်အောင်ငါလုပ်နေတုန်းပဲ။ - သင်၌ 700C ဘီးများရှိပါကသင်သည်အချို့သောခြေချောင်းထပ်နှင့်ထပ်တူကျရုံသာရှိသည်။
ဘောင်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်လက်လှမ်းမီမှုအတိုနှင့်အတိုသွားနေစဉ်ခြေချောင်းထပ်နေသည်ကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ယင်းတို့အနက်တစ်ခုမှာထိုင်ခုံပြွန်ထောင့်ကိုပိုမိုမတ်မတ်စေသည်။ သူတို့ပိုနှစ်သက်သောအခြားအဖြေတစ်ခုမှာချိတ်ဆတ်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ အခြားလှည့်ကွက်တစ်ခုရှိပါကသင်သည် pun, cross-toe solution ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုပါက ပို၍ သေးငယ်သောဘီးများအထူးသဖြင့် 650B နှင့် 650C အကြောင်းပြောဆိုရန်အချိန်တန်ပါပြီ။ ငါချက်ချင်းထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ်။ ငါသေးငယ်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာစက်ဘီး၏ကြီးမားသောပန်ကာပေါ့။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်တွင်ဘီးသေးသေးများဖြင့်စက်ဘီးကိုကိုင်တွယ်ခြင်းပိုကောင်းသည်ကိုတွေ့ရှိရ ငါခြေချောင်းတွေနည်းသွားတယ်။ အထူးသဖြင့် Cr osswinds မှာစက်ဘီးစီးတာပိုကောင်းတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့ဘီးရဲ့သေးငယ်တဲ့theရိယာကဘေးဘက်ကကြည့်တဲ့အခါလေနည်းနည်းနည်းတယ်။ ငါ 650C အတွက်အထူး ဦး စားပေးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Geelong မှာကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်အချိန်အနိုင်ရခဲ့တယ်၊ ငါ P50 မှာ 650C ဘီးတွေရှိတယ်၊ 700C စက်ဘီးမှာလေခွင်းအလုံအလောက်မရဘူးဆိုတာငါလုံးဝသေချာတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ။
ဒီစက်ဘီးကိုငါအရမ်းကြိုက်တယ် ငါ 700C ဘီးပေါ်တွင်ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီး, လမ်းပြိုင်ပွဲများကိုပြု၏။ ငါ၌ငါတကယ်အဆင်ပြေကြောင်း 700C ပြိုင်ကားစက်ဘီးရှိခဲ့ပါတယ်။
လူအများစုကမင်းကိုဘာကြောင့်တစ်ချိန်လုံး 650 မမောင်းတာလဲလို့ငါ့ကိုမေးတယ်။ ကောင်းပြီပြproblemsနာစုံတွဲတစ်တွဲရှိပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံး 700C ဘီးများနှင့်လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်များကိုပြုလုပ်သောပြိုင်ကားစက်ဘီးစီးသူများစွာမရှိကြပါ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်သင်သည်ကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်ပြားချပ်ချပ်တစ်ခုရရှိပါက 650 ကိုမောင်းနှင်ပါကကြားနေဝန်ဆောင်မှုမှတာယာအပိုများရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
ငါကြိုးစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆိုးဝါးစွာမှားယွင်းသွားမိလို့ငါသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ 700C ဘီးကိုလမ်းပေါ်မှာအမြဲစီးနင်းပါတယ်။ ထိုအခါငါနေဆဲငါ့အပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာလုပ်ပါ။
ငါဟာလူမျိုးတစ်မျိုး၊ နှစ်မျိုးအမြဲကစားမယ်ဒါမှမဟုတ်အားကစားလုပ်ရင်ဘဝကိုပိုလွယ်ကူစေသည်။ ဒါ့အပြင် triathlons များ၊ အားကစားသမားများ၊ သင်၏နောက်ကွယ်မှာသီးခြားအသင်းကားရှိသည့်ပြိုင်ပွဲများကဲ့သို့သင်၏ထိုးဖောက်ခြင်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်သည့်အဖြစ်အပျက်များအတွက်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်အချိန်စမ်းသပ်မှု ၆၅၀ သည်သေးငယ်သည့်မြင်းစီးသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြားချပ်ချပ်တာယာများကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြုပြင်ရန်၊ သင်၏အတွင်းပိုင်းပြွန်များစသည်တို့ကိုယူရန်သို့မဟုတ်သင်၏အချိန်ကားတွင်နောက်ဘီးများပါ ၀ င်ရန်သင့်အတွက်ဘီးများ၊ တာယာများနှင့်အတွင်းပိုင်းပြွန်များရွေးချယ်ခြင်းကိုလျှော့ချပါ။ သို့သော်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသေးသည်။ သေးငယ်သောလူများကသင့်တော်သောစက်ဘီးကိုတောင်းသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့တိုးများလာသည်။ ယခု ပို၍ သေးငယ်သောဘီးများသည်အနည်းငယ်မြင့်မားသောခုခံနိုင်စွမ်းရှိသော်လည်းမှန်သည်ဘီးသေးငယ်သောကြောင့်ဆွဲအားနည်းခြင်းနှင့်အလေးချိန်နိမ့်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းထက်ပိုမိုကြောင်းသိပ္ပံပညာကပြသသည်။
၎င်းသည်ဘီးအရွယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအတားအဆီးများ၏အရွယ်အစားသည်သိသိသာသာကြီးသောလမ်းမကြီးပေါ်တွင်မောင်းနှင်ခြင်းကဲ့သို့မဟုတ်ပါ၊ လမ်းမျက်နှာပြင်သည်များသောအားဖြင့်အတော်အတန်သေးငယ်သည်။ (ပျော့ပျောင်းသောဂီတ) စက်ဘီးစီးသူအများစုအတွက်ယခုအချိန်သည်လေခွင်းအားနည်းခြင်းမတိုင်မီသက်သောင့်သက်သာရှိလာသည်၊ ၎င်းသည်လုံးဝမှန်ကန်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်မြန်မြန်သွားချင်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းစက်ဘီးရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာလည်းရှိမယ်ဆိုရင်လား။ မြင့်မားသော, သင်လေခွင်းနှင့်လုံခြုံဆွဲယူဘို့အနိမ့်သွားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အထူးသဖြင့်တိုတောင်းတဲ့စက်ဘီးစီးသူတွေအတွက်ပြaနာတစ်ခုပါ။ သင်၏ကုန်းနှီးကသိပ်မြင့်လွန်းခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်၏လက်ကိုင်ဘားများသည်အတော်အတန်နိမ့်သည်။ စက်ဘီး ၆၅၀ တွင်ရှေ့ဘက်တွင်သင်နိမ့်ကျနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာစက်ဘီးကိုယ်တိုင်မြေပြင်နှင့်နီးကပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ဘီး။ 700C frame နဲ့မင်း ဦး ခေါင်းပြွန်ရဲ့အမြင့်ကိုကြည့်ချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သိပ်ကြီးလွန်းလို့သင်လုပ်နိုင်တာသိပ်မရှိဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, အောက်ဖက် sloping အဓိကအားရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းနောက်ထပ်ရှေ့ဆက်သငျသညျယူပါ။
အလွန်သေးငယ်သောခေါင်းပြွန်အမြင့်ပါသောဘောင်တစ်ခုသည်အလွန်နိမ့်ပါကပင်စည်အောက်တွင်နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်အမြဲထည့်နိုင်သည်။ သို့သော်မြင့်လွန်းလျှင်သင်မလုပ်နိုင်ပါ။ (ပျော့ပျောင်းသောဂီတသံ) crank length သည်သေးငယ်သောအသံကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်တိုတောင်းသောစက်ဘီးစီးသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်တွင်ခြေတိုတိုများရှိပါကသင်သည်ခြေထောက်ရှည်သောတစ်စုံတစ်ယောက်ထက်အကြွင်းမဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာနည်းလိမ့်မည်။ သို့သော်ရှည်လျားသော crank ကိုဆိုလိုသည်မှာသင်၏ခြေနင်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောစက်ဝိုင်းသို့ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ခြေနင်း၏အောက်ခြေတွင်သင့်ခြေသည်အလွန်အမင်းနိမ့်သည်။ ရှည်လျားသော crank ဖြင့်ခြေနင်းထိမှန်စေရန်သင်၏ကုန်းနှီးကိုအနိမ့်အမြင့်ထားရှိရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ခြေထောက်သည် crank တိုခြင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်။ မင်းဒူးထောက်တာကိုအစာအိမ်ထဲထည့်လိုက်တယ်၊ ငါ့ကိစ္စမှာဒီဟာကအရမ်းနိမ့်တဲ့အချိန်မှာပြproblemနာတစ်ခုပါ။ ထို့ကြောင့်သေးငယ်သောစက်ဘီးစီးသူများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုတိုတောင်းသော cranks များသည်ခြေရာခံရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ထို့ကြောင့်သေးငယ်သောမြင်းစီးသူရဲအများစုအတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိရန်နှင့်သင်၏ဒူးနှင့်တင်ပါးကိုထိခိုက်နိုင်မှုအပြင်ဘေးချင်းယှဉ်။ လှုပ်ခြင်းမှဖြစ်နိုင်သောကုန်းနှီးပြproblemsနာများကိုရှောင်ရန်နှစ်တိုနှစ်ခုလုံးကိုတိုရန်စဉ်းစားသင့်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်၏ကိုင်တွယ်မှုနှင့်တိုးတက်မှုများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ၁၇၀mmmm crank မှ ၁၆၅ မီလီမီတာ crank သို့ဤကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုသို့ရောက်သောအခါရလဒ်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၁၅၅ မီလီမီတာအကန့်တွေဒီနေ့ခေတ်မှာယေဘူယျအားဖြင့် 165s ရှိပါတယ်။ အခုတော့လူအချို့ကပြောတာကတိုတောင်းတဲ့ crank နဲ့မင်းဟာ torque နည်းပြီးစွမ်းအားနည်းတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်၊ torque နည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပေအတူတူပေ speed ကပိုမြင့်တာပဲ။
သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် torque နှင့် cadence ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ညှိနှိုင်းမှုကိုပိုမိုမြင့်မားသော cadence သို့ pedaling လုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါက၎င်းညှိနှိုင်းမှုကိုသင်ရွေးချယ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ တိုတောင်းသော crank သည်သင်၏စွမ်းဆောင်မှုကိုမထိခိုက်စေသင့်ပါ။ သို့ရာတွင်၊ သင်တက်မည့်မတ်စောက်ဆုံးတောင်တက်တောင်များ၌ပင်မြင့်မားသော cadence ကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်၌အားနည်းသောပစ္စည်းကိရိယာများရှိနေသည်ကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ (soft music) အခုဆိုရင်တိုတောင်းတဲ့ handlebar-width မြင်းစီးသူရဲတွေအတွက်တကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခု၊ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ပခုံးရှိသူတစ် ဦး ကိုတကယ်ကျယ်ပြန့်တဲ့လက်ကိုင်တွေကိုစီးဖို့အတွက်ကြည့်ရတာအရမ်းမိုက်မဲတဲ့ပုံပဲ။
ငါမှန်လားကြည့်ရှုသူလား MM hmm ၃၈ စင်တီမီတာထက်ပိုသောမည်သည့်လက်ကိုင်ဘာသာသည်မဆိုစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးမသက်မသာခံစားရသည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယခုတွေ့မြင်ရပြီးအမှန်တကယ်တွင်ပါးပျဉ်းပေါ်တွင်အကျယ် ၃၆ စင်တီမီတာခန့်ရှိသောကျွန်ုပ်၏လက်ကိုင်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒါကအများကြီးပိုကောင်းခံစားရသည်။
သို့သော်ကျယ်ပြန့်လွန်းသောလက်ကိုင်ဘားသည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်မောင်းနှင်သည့်အပြုအမူကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲစေသည်။ အနည်းငယ်မျှသာလျှင်ပင်သင်၏ကုန်းနှီးအတိုင်းအတာကိုကြီးမားစွာတိုးပါ။ သို့သော်ပြproblemနာတစ်ခုမှာ curvature သည် drop curve အချင်းဝက်သည်အလွန်ကြီးသောအခါဖြစ်သည်။
အခုတော့မင်းကသိပ်မကြီးဘူးဆိုရင်မင်းမှာမင်းတို့မှာလက်သေးသေးလေးတွေရှိတယ်။ ငါကျိန်းသေလုပ်ပါ။ ပြီးတော့မတော်လျော်သောစက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုတကယ်မသက်မသာဖြစ်စေသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာဘရိတ်လီဗာများ၏မှားယွင်းသောရောက်ရှိမှုဖြစ်သည်။ သင်၏လက်များသည်တစ်ချိန်လုံးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူရုံသာမကသင်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်လည်းအန္တရာယ်ရှိသည် သင်လိုအပ်သည့်အခါမြန်မြန်ဘရိတ်လီဗာ။
ပိုဆိုးတာကတော့ဘရိတ်စက်တွေကိုလက်နဲ့အမြဲတမ်းသိမ်းထားနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့သင်ကြောက်နေရင်အဲဒါတွေကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး၊ ဒါကြောင့်လက်မောင်းများလက်လှမ်းမမီအောင်ထိန်းညှိပေးသည့်လက်ကိုင်အစုတစ်ခုရရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လက်ကိုင်အိတ်တစ်ခုဝယ်တဲ့အခါသင်အမြဲသိနိုင်တယ်။
ပိုမိုတိုတောင်းသောရှေးရှေးများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည့် handlebar ညှိနှိုင်းမှု၏နောက်ထပ်အသေးစိတ်တစ်ခုမှာသင်လက်ကိုင်ဘားများတပ်ဆင်ထားသောထောင့်နှင့်လက်ကိုင်ဘားပေါ်ရှိပါးလွှာသည့်နေရာများဖြစ်သည်။ ဤလက်ကိုင်ခလုတ်ကိုယခုအချိန်တွင်နေရောင်တိပ်ဖြင့်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းကိုငါပြချင်တာကသူကပါးပျဉ်းဘောင်းဘီတွေအပေါ်မှာထားထားတဲ့နေရာနဲ့ထောင့်တိုင်ထားတဲ့ထောင့်ကဘယ်လောက်ကွာခြားတယ်ဆိုတာပြချင်တယ်။ ဒါနဲ့ပင်မ screws ဖြေလျှော့။
စစ်ဆေးပါ။ (soft music) (tool ၏ clacking) ပြီးတော့ဒီမှာထောင့်ပြောင်းတာကကုန်းနှီးကနေပါးပျဉ်းအထိအကွာအဝေးကိုအများကြီးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာမင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်က back up လုပ်လိုက်ရင်အဲဒါကိုပိုမိုနီးကပ်စွာနဲ့ရလွယ်ကူစေသည်။
အလားတူစွာသင်ဘားပေါ်ရှိပါးပျဉ်း၏အနေအထားကို (soft music) ကိုချိန်ညှိပါကပါးပျဉ်းနှင့်ပိုနီးကပ်သောကန့်လန့်ကျင်များကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးအကွာအဝေးကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ လက်ကိုင်ပေါ်တွင်ပါးပျဉ်း၏အနေအထားအကွာအဝေးလေးစင်တီမီတာကွဲပြားခြားနားစေသည်။ အရေးကြီးသည်မှာအရေးကြီးသည့်အချက်မှာလက်ကိုင်ဘားရှိပါးပျဉ်း၏အနေအထားကိုပြောင်းလဲခြင်းကကုန်းနှီးမှသည်ပါးပျဉ်းအထိအကွာအဝေးကိုသာမကသက်ရောက်မှုသည်ဘရိတ်လီဗာမှအဝေးထိန်းများအထိသက်ရောက်သည်၊ လက်တို့ကို။
ဒါကြောင့်သင်ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။ လက်လှမ်းမမီကို ဦး စွာတပ်ဆင်ပြီးလက်ကိုင်ဘားများကိုသင့်အတွက်မှန်ကန်သောထောင့်အတိုင်းထောင့်တင်ပါ။ ဘရိတ်လီဗာလက်လှမ်းမီမှုအတွက်စိုးရိမ်ပါ။ (Soft music) အခုဆိုရင်ငါ lever အရမ်းဝေးတဲ့အခါလက်သေးသေးလေးတွေရှိရင် Mechanical shift lever တွေနဲ့ဘယ်လောက်လေးတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့အရေးကြီးတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကဒီ side force ကိုအပြည့်အ ၀ ကိုင်လို့ရတယ်၊ ငါသူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မမြန်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့အီလက်ထရောနစ်ပြောင်းရွေ့တဲ့လီဗာတွေကိုပိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အတွက်တော့အဲဒါဟာပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလက်ချောင်းကိုမြန်မြန်လုပ်နိုင်တယ်၊ အခုငါစိတ်မကောင်းစရာ၊ အားနည်းနေတဲ့လက်တွေကပင်ပန်းတာထက်ဘာမှမသတိထားမိဘဲလိုအပ်ရင်မြန်မြန်ပြောင်းနိုင်တယ်။ လက်ငယ်လေးများသို့ရောက်သည့်တိုင်၎င်းမှာလည်းဘရိတ် hoods ၏ဒီဇိုင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘရိတ်ကတ်များသည်ကျယ်ပြန့်သောလက်ကိုင်အစုအချို့ရှိပြီးကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်လက်များကိုမရရှိနိုင်ပါ။
ဒါကတော်တော်လုံခြုံတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့လက်တွေကဒီလောက်လုံခြုံမှုမရှိဘူး၊ ငါတကယ်လေ့ကျင့်ရေးနှစ်ခါကျခဲ့တယ်၊ ဒါကသိပ်ကိုမကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့်လက်ကိုင်အပေါ်မူတည်ပြီးသပ်ရပ်လှပတဲ့မြတ်သောဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်အမြဲရွေးသည်။ (ပျော့ပျောင်းသောဂီတ) ယခုငါသေးငယ်တဲ့စက်ဘီးစီးသူများအတွက်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောအသေးစိတျအခြို့နှငျ့နိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာပုလင်းကိုင်ဆောင်သူများအတွက်နေရာ။ သင့်မှာ frame သေးသေးလေးတစ်ခုရှိရင်၊ တြိဂံဟာသေးငယ်ပြီးပုလင်းနဲ့ပုလင်းအိတ်ထဲမှာနေရာချဖို့နေရာမရှိတော့ဘူး။ သငျသညျအထဲကနှင့်အထွက်ပုလင်းရတဲ့အခက်အခဲရှိပေမည်။
အဲဒါငါ့အတွက်တော်တော်လေးတင်းကျပ်တယ် ပုလင်းအိတ်နှစ်လုံးသည်အကွာအဝေးကိုအမှန်တကယ်တိုးစေနိုင်သည်၊ ယင်းကရှေ့တန်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်။ ၎င်းသည်သင့်လျော်သောအကွာအဝေးကိုရရန်သင်သည်းခံရမည့်အရာသာဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးကားနောက်ဘီးအထက်။ ဒါကြောင့်သင် 700C စက်ဘီးစီးမယ်ဆိုရင်သင်သေးငယ်တဲ့အချိန်မှာကုန်းနှီးအမြင့်နဲ့နောက်ဘီးကြားမှာနေရာသိပ်မကျန်တော့ဘူး။ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားတို့မှာဒီsadရာမကုန်းနှီးအိတ်တစ်လုံးရှိရင်၊ နောက်ဘီးကိုတကယ်ထိမိမှာသေချာတယ်။
ငါကြိုးစားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင်၏မြန်နှုန်းနှင့်သင်၏ saddlebag ၏သမာဓိရှိမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌နောက်ဘီးနှင့်ပတ်သက်သောကုန်းနှီးအနိမ့်အမြင့်ကြောင့်လည်း၊ မှောင်မိုက်သောနေ့ရက်များကိုထိုင်ခုံတိုင်၌မီးထွန်းထားလျှင်အမြီးကားနောက်ဘက်ဘီး၏အမြင့်အောက်တွင်ရှိနေကြောင်းသင်တွေ့ရှိကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှမြင်နိုင်။
ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ကုန်းနှီးဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာထိုင်ဖို့အတွက်သင့်ရဲ့အလင်းကိုပိုမြင့်အောင်ထားဖို့သတိရချင်တယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီဆောင်းပါးကဒီကြီးမြတ်တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုတောင်းခံခဲ့တဲ့သူတွေကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါတကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မကြီးသောသူများအတွက်ကြီးမားသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားလက်မထောင်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်သင်၏ကလေးငယ်များနှင့်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းသဘောမပေါက်သောသင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။ သင့်တွင်အခြားမေးခွန်းများရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်ထားပါ။ ငါကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေနှင့်သင်တို့အဘို့ထိုသူတို့ဖြေဆိုရန်အတတ်နိုင်ဆုံးပြုလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် Power to Weight သည်အခြားလူတိုင်းထင်ထားသကဲ့သို့အရေးမပါနိုင်သည့်ဤဆောင်းပါးကိုသင်ကြည့်ချင်ပေမည်။ တောင်းပန်ပါတယ်
စက်ဘီးX-ပြောင်းလဲမှု။ 908 ဒဗလျူ
Wheelie ကောင်းပါတယ်စက်ဘီးဆိုင်။ 5633 S က 16 ။
သခွားမသီးစက်ဘီး။ 3021 N ကို Portland AVE ။
Ellis ENDURANCE Lab ။ ၁၁ ရက်
ငါ့စက်ဘီးစတိုးဆိုင်, INC ။ DBA SCHLEGEL BICY ။
Tom ရဲ့အပြိုင်စက်ဘီး, INC ။ 6861 အက်စ်
Cycle CITY - PARKVILLE ။ 6328 LEWIS ST ။ , SUITE 200
အထက်တန်းလွှာစက်ဘီးစီးခြင်း။ 10673 မစ်ရှင်လမ်း။
ခံစားရတယ်ဂျင်မ်ကတည်ထောင်ခဲ့သည်ခံစားရတယ်ဘယ်အချိန်မှာ 1994 အစောပိုင်း၌တည်၏ခံစားရတယ်ထုတ်ကုန်များကို Answer Products မှဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ခံစားရတယ်(၇) နှစ်ကြာဆက်ဆံရေးပြီးနောက်အဖြေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်တွင် Rossignol Group မှဝယ်ယူခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်ခံစားခဲ့ရစက်ဘီး။
China Uncensored ၏ဤအဖြစ်အပျက်တွင်စတော့စျေးကွက်ပူဖောင်းကိုမေ့လိုက်ပါ၊ ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏မယုံနိုင်စရာစက်ဘီးစတော့ရှယ်ယာပူဖောင်းဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ။ တရုတ်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အိမ်ရှင်ခရစ်ချာပယ်လ်ဖြစ်သည်။
စက်ဘီးဟောင်းအဟောင်း သစ္စာရှိသောနှစ်ဘီးသံမြင်း။ သင်လေကောင်းလေသန့်နှင့်အားကစားတစ်ခုခုရလိုသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်ကလေးကိုကျောင်းသို့ခေါ်သွားမည်သို့မဟုတ်“ WickDonald's” တွင်အမြန်အစားအစာစားလိုသည်ဖြစ်စေ၊ စက်ဘီးနှင့်တရုတ်တို့သည်မြင်းနှင့်ရထားနှင့်တူသည့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတစ်ခုနှင့်တူသည်။ အခမဲ့ဆိုင်ကယ်ခွဲဝေမှု, ဒီဆက်ဆံရေးအဆိပ်ဖြစ်လာသည်။
ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရုတ် China Uncensored ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတရုတ်ရဲ့စက်ဘီးဝေမျှခြင်းအစီအစဉ်ဟာလုံးဝဘေးအန္တရာယ်အဖြစ်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ တရုတ်စက်ဘီးခွဲဝေမှုနှင့်အမေရိကန်ဆိပ်ကမ်းများတွင်သင်အသုံးပြုခဲ့ရာများအကြားကြီးမားသောခြားနားချက် ဥပမာအားဖြင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ နယူးယောက်ရှိစက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်သင်ကသူတို့ကိုသင်္ဘောဆိပ်မှခေါ်ယူပြီးသင်၏သင်္ဘောကျင်းတွင်ချထားပါ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့တစ်ခုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်စက်ဘီးကိုသင်သော့ဖွင့်နိုင်သည်။ အကျိုးကျေးဇူးများမှာမြို့အစိုးရများသည်၎င်းကိုတိကျသောနေရာတစ်ခုတွင်သပ်ရပ်စွာထားရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။ စက်ဘီးငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းတို့နှင့်သူတို့လိုအပ်သည့်နေရာသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဗင်ကားများဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ဘီးများကိုခြေရာခံရန်လွယ်ကူသည်။
ဒါပေမယ့် 'နောက်ဆုံးမိုင်ပြproblemနာ' ရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆိပ်ကမ်းများမှာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိပြီးလူတစ် ဦး သည်ခရီးကိုစတင်ချင်သည်ဖြစ်စေမိုင်တစ်မိုင်လောက်အကွာလောက်မှာဆိပ်မရှိလျှင်သူတို့ကစက်ဘီးကိုမျှဝေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Bronx တွင်နေထိုင်သောသူအားလုံးကိုဝမ်းနည်းပါ။ သို့သော်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဤနောက်ဆုံးမိုင်ပြproblemနာကိုမြို့ကြီးများသည်ကုသနိုင်သည်။ Dockless စက်ဘီး! စက်ဘီးတိုင်းတွင်ရှိသော GPS ချစ်ပ်များကြောင့်သင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုလွယ်ကူစွာသော့ဖွင့်နိုင်သည်။
သင်ပြီးတဲ့အခါသင်လိုချင်တဲ့နေရာမှာထားခဲ့ပါ။ မင်းဆိုလိုချင်တာငါဆိုလိုတာ! တစ်ခါတစ်ရံကုသခြင်းသည်ရောဂါထက်ပိုဆိုးနိုင်သည်။ ဤမြို့သည်ရှန်ကျန်းမြို့ရှိပန်းခြံတစ်ခုသို့ဝင်ပေါက်၏ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းလူများသည်အ ၀ င်ပေါက်အထိမျှဝေသည့်စက်ဘီးကိုစီး။ မွန်ကိုအခြားစက်ဘီးများ၏topရာမပုံပုံပေါ်တွင်တင်ပြီးရှုခင်းကိုကြည့်ရှုရန်အတွင်းဘက်သို့ ဦး တည်ကြသည်။
တရုတ်၏ dockless စက်ဘီးစီးခြင်းလုပ်ငန်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအလွန်တရာကြီးမားသောအပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများကြောင့်အရူးကဲ့သို့ကြီးထွားလာသည်။ ယခုအခါတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောစက်ဘီးငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ခန့်သည်မြို့ကြီးများကို၎င်းတို့၏စက်ဘီးများဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်စျေးကွက်ဝေစုရရှိရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ သူတို့၏စက်ဘီးသည်ပုံအောထိပ်တွင်ရှိနေသောအခါလူတို့သည်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဟူသောအတွေးဖြင့်ဖြစ်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်ရန်။ သတ်မှတ်ထားသောဒေသတစ်ခုတွင်လုပ်ကိုင်နိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်နှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းများကိုကန့်သတ်ချက်မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ဖန်တီးမှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သူမသည်သူမနောက်ဆုံးမိုင်လမ်းလျှောက်ရုံပိုကောင်းခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်ထင်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကြီးမားဆုံးစက်ဘီးစီးခြင်းလုပ်ငန်းနှစ်မျိုးမှာ Ofo နှင့် Mobike ဖြစ်သည်။
သူတို့အကြား၌၎င်းတို့တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူသန်း ၁၂၀ ကျော်ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်စက်ဘီး ၁၃ သန်းကျော်တက်နေသည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုဖြစ်နိုင်သမျှအကုန်လုံးကိုဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့အကျိုးတူအရင်းအနှီးအဖြစ်ထားခဲ့တယ်။ Ofo သည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁.၃ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှပ်နှံရန်အတွက်သူ၏လက်မှတ်ထိုးတံဆိပ်ဖြစ်သော Canary-yellow bikes ……ရန်ပုံငွေငါးခုတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Mobike သည်မကြာသေးမီကဒေါ်လာ ၆၀၀ မီလျံရရှိခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်ဆုံးရန်ပုံငွေရရှိခဲ့သည်။ စျေးကွက်ကိုဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိစေသည်။ ပြီးတော့ဒီဂဏန်းဆယ်လုံးရှိတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတွေဟာစက်ဘီးတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်မောင်းထုတ်ခြင်း၊ ဈေးနှုန်းကိုတတ်နိုင်သမျှအနိမ့်ကျအောင်ထိန်းခြင်းနဲ့လမ်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးထားခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်ဝေစုကိုလွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ငွေရေးကြေးရေးပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နေသည်။
ယင်းကိုရင်ဆိုင်ရန်အချို့မြို့များသည်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုသိမ်းယူရန်အဖွဲ့များကိုစတင်စေလွှတ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ စက်ဘီးစီးသည့်လမ်းကြောင်းသည်စက်ဘီးပုံကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်စက်ဘီးစီးသူကိုလမ်းပေါ်တွင်ကားမောင်းရသည်။
ဟဟားမဟုတ်ဘူး၊ စက်ဘီးတွေပိုများတယ်။ ထိုထက်ပို။ စက်ဘီး။ ထိုထက်ပို။ စက်ဘီး။
ထို့အပြင် ပိုပြီး စက်ဘီး! သို့သော်အနည်းဆုံးအားဖြင့်နောက်ကျသောအရာအချို့ရှိခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ရှန်ဟိုင်းသည်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလျှင် ၁.၅ သန်းရှိကြောင်းသိရှိပြီးနောက် ၁၆ ယောက်လျှင် ၁ ယောက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်လုံလောက်သည်ဟုစတင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ရှန်ဟိုင်း Transp ရုံးမှစက်ဘီးမျှဝေသည့်ကုမ္ပဏီများကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးစက်ဘီးများမသွားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ညံ့ဖျင်းသောရပ်ကွက်များနှင့်မျှဝေထားသောစက်ဘီးစီးသူများကိုအပြစ်ပေးရန်တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်းအဆိုပြုချက်ရှိသည်။ အကယ်၍ မည်သူမဆိုသူတို့၏နိုင်ငံသားများကိုရဲရဲရဲရဲဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်တရုတ်အစိုးရဖြစ်သည်။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွါးအရ... သူတို့ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးနည်းပညာကလူ ဦး ရေတစ်စက္ကန့်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ငါ 1984 သည် Terminator နှင့်အတူ Premium Rush နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်တူသောခံစားရမယ်လို့သိကြ ကောင်းစွာကျိုးနပ်သည်။
သို့မဟုတ် - ငါသိသည်အရူးဟုထင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားထောင်ပါ။ အစိုးရတစ်ခုချင်းစီကိုအပြစ်ပေးမည့်အစား၊ စက်ဘီးငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများသည်တာ ၀ န်ယူမှုရှိစေရန်သေချာစွာစဉ်းစားထားသောမူဝါဒများချမှတ်ရန်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ လူတွေကိုအပြစ်ပေးတာကိုဟားဟား တရုတ်ရဲ့စက်ဘီးမျှဝေမှုဘေးအန္တရာယ်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုအောက်တွင်ချန်ထားပါ။
ယခုမှာသင်၏တ ဦး တည်းဖြစ်သော Patreon တွင် China Uncensored buteto ကိုယူလာနေသောကျွန်ုပ်၏ 50 Cent Army ကိုထောက်ခံသူများမှမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေဆိုရန်အချိန်တန်ပြီ။ Primo က 'ငါသိချင်တာတစ်ခုကမင်းဟာပိုပြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားမိတာလားဒါမှမဟုတ်ပြပွဲရဲ့သရော်စာသဘောသဘာဝကဘာဖြစ်သင့်သလဲဆိုတာပဲ။ '' မေးခွန်းကောင်းက ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ငါအရင်ကတရုတ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်၊
ငါဘယ်သူ့ကိုမှတကယ်စိတ်မ ၀ င်စားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ဟာတကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အပေါ်ကြီးမားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလို့ပါ။ ဤသည်မှာကွန်မြူနစ်ပါတီသည်ဤလူလုပ်ကျွန်းများကိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်၌စတင်တည်ဆောက်စဉ်က၎င်းင်းတို့၏နယ်မြေဖြစ်သည်ဟုဆိုသောအချိန်လည်းဖြစ်သည်။
အစိုးရသည်ကျွန်းများအတုများကိုစတင်ဆောက်လုပ်ပြီးရှေးဟောင်းတရုတ်ပိုင်နက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကိုပြောနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာသရော်စာကိုသုံးတာကတရုတ်ပြည်ရဲ့သတင်းနဲ့နိုင်ငံရေးမှာပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ရိုးသားမှုရှိပါကကျွန်ုပ်သည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုသာပြုလုပ်နေပါကသင်စောင့်ကြည့်နေ ဦး မည်လော။ သင့်မေးခွန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Primo ။
သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ကျွန်ုပ်ကိုမေးလျှင် China Uncensored 50 Army သို့ဝင်ရောက်ပါ။ ငါတို့မှာသေနှုန်းကအရမ်းနည်းတယ်။ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အတွက်တစ်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ထိုထက်မကပဲသင့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခွင့်ပေးပြီးသင်ငါ့ကိုပြပွဲမှာကျွန်တော်ဖြေဆိုနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးခွင့်ရှိတယ်။
ဒီတော့ Pateron.com/chinauncensored ကိုသွားပြီးထပ်ရှာပါ။ ဤတရုတ်ဇာတ်သိမ်းခန်းကိုကြည့်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
တနည်းကား, ငါခရစ် Chappell ဖြစ်၏ နောက်တစ်ခါတွေ့မယ်
အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်ခံစားခဲ့ရစက်ဘီး၏ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်တောင်ကြီးစက်ဘီး၂၀၂၁ အတွက်၎င်း၏မော်ဒယ်အသစ်များတွင်မော်ဒယ်လ်အသစ်များထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါ။ လက်ရှိ XCM ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Ramona Forchini အသင်းသည် ၉ နှစ်အကြာတွင်အသင်းမှပြောင်းလဲလာသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ခံစားရတယ်Superior သို့စက်ဘီးစီး။
တစ်ကယ်ခံစားခဲ့ရ BMX ဆိုင်ကယ်ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
ဒီအကွာအဝေးဆိုင်ကယ်မြင်းစီးရုံအားကစားသို့ရတဲ့အဘို့အကောင်းတစ် ဦး ရွေးချယ်မှုနိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၄၀၀ မှ ၆၀၀ ကြားအကွာအဝေးသည်အလယ်အလတ်အကွာအဝေးဖြစ်သည်စက်ဘီး။
ဆွစ်ဇာလန် Ramona Forchini ၏အသင်း, jb BRUNEXခံစားရတယ်အသင်းအဖွဲ့ရှိပါတယ်jb BRUNEX Superior Factory Racing နှင့်အဓိကအကြောင်းရင်းကိုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်ဟုတ်တယ်သောခံစားရတယ်အသစ်ထုတ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါတောင်ကြီးစက်ဘီးတော့ဘူး။ ကုမ္ပဏီကံမကောင်းတာပဲမှတ်တိုင်ကထုတ်လုပ်မှုအသစ်၏တောင်ကြီးစက်ဘီး။
Theခံစားရတယ်အမိန့်သည်အလတ်စားခရီးသွားလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဆိုင်ကယ်တစ် ဦး အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်ထိရောက် pedaling ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ။ အရှေ့ဘက်တွင် ၁၅၀ မီလီမီတာ၊ နောက်ဖက်တွင် ၁၄၀ ဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်အလယ်အလတ်ရှိသောနယ်မြေတွင်တည်ရှိသည်။ သို့သော်သင်ကအောက်သို့ဆင်းနေသည့်အချိန်၌သာခံစားရသည်။
သင်ရေချိုးနိုင်သည်ခံစားရတယ်ထည်။ လက်ဆေးခြင်းသည်အ ၀ တ်လျှော်ရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ခံစားရတယ်စောင်နှင့်အခြားပစ္စည်းများ။ ခြောက်သွေ့တဲ့သန့်စင်ဆေးရည်များနှင့်အင်ဇိုင်းပါ ၀ င်သည့်ဆပ်ပြာများသည်ပျက်စီးစေသည်ခံစားရတယ်။ခံစားရတယ်ရေအပူချိန်နှင့်တုန်ခါမှုတို့အတွက်အထိခိုက်မခံသောကြောင့်စနစ်တကျမကုသပါကကျုံ့သွားနိုင်သည်။
ဘောင်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရကျိုးနပ်သည်ခံစားရတယ်ကတဆင့်လုပ်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ၃ နှစ်ဆိုင်ကယ်105 နှင့်အတူ $ 1000 နှင့်အတူညာဘက်အကြောင်းကိုအသံ။ခံစားရတယ်နာမည်ကြီးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အမှတ်တံဆိပ်စက်ဘီးအတူတူထိုင်ဝမ်သို့မဟုတ်တရုတ်စက်ရုံမှလာသည်။
Felt စက်ဘီးများသည်လမ်းခင်းမှသည်လမ်းများအထိတိကျသောအသုံးချမှုများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအခြေခံသည့်စက်ဘီးများကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်သည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမြင်းစီးသူများအတွက်သင့်တော်တဲ့စက်ဘီးမော်ဒယ်များကိုပေးစွမ်းပြီး eBay မှာရနိုင်ပါတယ်။ Felved သည်မည်သည့်စက်ဘီးအမျိုးအစားများကိုပြုလုပ်သနည်း။ လမ်းနှင့်လမ်းကြောင်း - Felts လမ်းနှင့်ခြေရာခံစက်ဘီးများသည်ပြိုင်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာစက်ဘီးက Triathlon စက်ဘီးကိုစတင်တာတာလဲ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ Felt Bikes သည် triathlons များနှင့်အချိန်ကာလစမ်းသပ်မှုများတွင်အကြီးအကျယ်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးစပွန်ဆာပေးခြင်း၊ မြင်းစီးသူရဲများ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှုများကဲ့သို့သောအားကစားများအားလုံးအားဖြင့်သိသိသာသာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကုမ္ပဏီသည် Triathlon / TT စက်ဘီးကိုသာထုတ်လုပ်သည်မဟုတ်။
Jim Felt သည် Felt Bikes ကိုစတင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီကိုနာမည်ပေးခဲ့သည်။ သူသည်ထိုအချိန်ကစက်ဘီးဆောက်သူမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစားသူသည်ဆိုင်ကယ်စက်တပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။